Global Voices : Tamberin’ny 2007 sy drafitra lehibe ho an’ny taona 2008 · Global Voices teny Malagasy
Global Voices : Tamberin’ny 2007 sy drafitra lehibe ho an’ny taona 2008
Voadika ny 05 Janoary 2008 15:57 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Tsy hisy nahavinavina fa ny Chinese ant farmers(tantsaha Shinoa taloha?) no tantara be mpamaky indrindra tamin’ny taona 2007 iny.
Ireo tantara be mpamaky amin’ity vohikala ity dia ireo mpamaham-bolongana ao an-toerana izay lasa loharana sarobidy ho an’ny fantsom-baovao iraisam-pirenena ( sy mpitolona mavitriky ny demokrasia), tahaka ny fanoherana tany Myanmar, Pakistan ary izay mitranga ankehitriny any Kenya. Ny manintona ny vondrom-pamaky hafa ihany koa dia ny any amin’ireo toerana any « amparavodilanitra » tsy misy mpitantara tahaka ny rivodoza tropikaly any Barbados, Dominica, Jamaica, Cayman Islands, Honduras, ary Oman.
Taloha, ny mpanoratra sy ny tonian-dahatsoratry ny Global Voices dia namitimpitina ny sasany amin’ny tantara nalaza tany amin’y faritra samihafa. Vakiana izay heverin’ny mpamaham-bolongana any Amerika, any Karaiba, Kaokazy, Hong Kong, Korea, ary Philippines ho tena mahaliana nivoaka tamin’ny taona 2007 – ary dia aely ho fantatry ny mpamaham-bolongana Syriana, Maraokana, Arabo ary ny mpiteny portigey.
Tantaram-pananahana nalaza indrindra teto amin’ny Global Voices ny taona 2007
Matetika no tsy fandrefesana ny hatsarana ny habetsahana fa ireto aloha ny sasantsasany amin’ireo be mpamaky indrindra nandritra ny taona 2007 teto amin’ny Global Voices.
(Tantsaha taloha Bankirompotra nanao fihetsiketsehana tao Shenyang, sary avy amin’ny “The Free China”)
Maro amin’ny lahatsoratra be mpamaky no avy tao amin’ny vohikala Advocacy mikasika ny momba ny sivana sy ny fahafaham-pitenenana. Ny tena nampalaza ny lahatsoratra tahaka Chinese ant farmers sy ny fihetsiketseham-panoherana ho fiarovana ny tontolo iainana tao Xiamen dia noho ny fanasivanana mihatra amin’ny fantsom-baovao sy ny bolongana ao an-toerana indrindra.
Tsy hoe hitarika ny Global Voices ho lian-dra, fa tahaka ny be mpamaky ihany ilay izy. Maromaro ihany koa manko ny namaky ny lahatsoratra mikasika ny famonoana an’i Saddam Hussein, ny voninahitra azo avy amin’ny famonoana any Kurdistan atsimo, ary ny fampisehoana an-dahatsary ny neo-Nazi iray tany Russia.
Tsy vitsy ihany koa ireo voasariky ny resa-pananahana sy ny horakoraka miaraka aminy (mila tonian’io resaka io koa ve ?). Anisan’ny tantara nasirasira nandritra iny taona 2007 iny ny mpanakanto hip hop amerikana iray nirehidrehitra (sa nandrehidrehitra tovovavy 15 taona) tany Trinite, ny olona heverina ho masina nanambady maro tany Indonesia, ny fanehoan-kevitra ara-pananahana tany Hong Kong, ary ny vao haingana indrindra dia ny famitaham-bady voadradradradra atao amina televiziona Shinoa iray.
Global Voices in 2008
Nitombo avo roa heny ny mpamaky isan’andro ny Global Voices hatramin’ny fanombohan’ny taona 2007, ary ny mampiavaka azy amina vohikala mpiteny anglisy, dia i Shina no firenena be mpamaky ity indrindra aorian’ny Etazonia.
Ny taona 2008 indray no hanantenaninay mpamaky maromaro kokoa avy amin’ny mpamaky tsy mpiteny anglisy noho ny fanampian’ireo mpandika teny mahavita zava-tsy mampino ao amin’ny Lingua translators izay mandika ny lahatsoratra ato amin’ny Global Voices ho amina teny 12 hafa ka ao anatin’izany ny teny Arabo, Bangla, ary Malagasy. Mitombo isa izy ireo ka mahatonga azy ireo ho vondron’ny manolotena handika teny maro isa indrindra eto amin’ny web.
Efa mila resaka amin’ny mpanabolongana matetika kokoa, tsy tahaka ny taloha, ankehitriny ny famoaham-baovao iraisam-pirenena. Anontaniana sy henoina hevitra momba ny olom-pirenena mamoaka vaovao sy ny politika mila ho isan-kerinandro any amin’ny gazety, ny gazety-boky, radio ary televiziona ny mpanoratra ato amin’ny Global Voices ankehitriny. Ny pejy manokana mamoaka mivantana ny vaovao avy any amin’ny bolongana samihafa moa dia rohizin’ny famoaham-baovao malaza maro hanarahiny ny zavamisy farany.
Ary farany, efa amporisihina hizaha mpanambolongana maromaro kokoa any amin’ny toerana tsy voasahana tsara ankehitriny ny toniam-paritra sy fitenenana eto amin’ny Global Voices, manasa ireo mpanambolongana ireo handray anjara hiara-miasa amin’ny mpanolo-tena hanoratra mihoatra ny zato eto (mandefasa imailaka aminy raha tokony ho ao anatiny ianao!). Nitombo 20% moa ny mpanoratra teto hatramin’ny volana Oktobra mankaty amin’ny volana janoary.
Tetikasa vaovao hipoitra
Vao avy nanolotra vatsim-panampiana ireo tetikasam-pamahanam-bolongana dimy vaovao any Jamaika, Kenya, Iran, Madagasikara, ary Uruguay moa ny Rising Voices sampana avy aminay ihany ho tohin’ny fahombiazan’ny voavatsy avy any Bangladesh, Bolivia, Colombia, India, ary Sierra Leone.
Noho ny fanampiana avy tamin’ny Reuters, dia nanendry an’i ho Juliana Rotich tonian-dahatsoratry ny tontolo iainana ny Global Voices sy an’i Juliana Rincón Parra (tsy masontsivana nakana ny mpiasa tsy akory ny anarana Juliana) ho tonian-dahatsary. Samy hiantsoroka ny lohahevitra nampiandraiketina azy tsirairay avy eo amin’ny sehatra manerantany ireo tonia roa ireo.
Hiara-hiasa amin’ny Reuters ihany koa ny Global Voices ao anatina tetikasa iray hisahana manokana izay lazain’ny tontolom-bolongana manerantany amin’ny fifidianana ho filohan’i Etazonia ho avy io.
Ireo ny sasany amin’ny zavatra hotanterahina eto amin’ny tontolon’ny Global Voices mandritra ity taona 2008 ity. Miarahaba ny mpamaky, ny mpanabolongana, ny mpandika teny, ny mpanavao, ary ny mpanohana ary nahatratra ny taona vaovao ary mirary soa antsika rehetra.
2 andro izayBahrain
7 andro izayTiorkia